စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ Ciao! သင်သည် အီတလီတွင် ဘဝတစ်သက်တာ၏ ဦးတည်ရာကို စီစဉ်နေပါသည်။! ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနုပညာက၎င်း၏အကျင့်ကိုကျင့်၏ကတိတော်များကိုသင် elate နှင့်လာအောင်နှိုးဆွဖို့သောခေတ်ဆန်းနှင့်တစ်မြို့ရဲ့မွေးရပ်မြေဖြစ်ပါသည်, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, နှင့်၎င်း၏မေတ္တာအစားအစာနှင့်အတူ. အီတလီသည်အိမ်ဖြစ်သည်…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ကိုဗစ်-၁၉. ငါတို့ပြောတတ်တဲ့အရာအားလုံးပဲ, နှင့်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်. ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာကမ္ဘာ့မြိ်ု့များနှင့်လုံးဝကျနော်တို့နေ့စဉ်ဘဝအကြောင်းကိုနှင့်သင်တန်းရထားခရီးသွားစဉ်းစားလမ်းကိုပြောင်းလဲသွားပြီ. ရထားခရီးသွားခြင်းသည်များစွာသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်…